Ny fiarovana ny fifanarahana - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
Ny zavatra fiarovana fifanarahana ho an'ny - dia ny antoko nanaiky ny hanandratra ny fihinanana valo zato tapitrisaao, izay mifanaraka amin'ny hampitombo ny isan-taona ny fakana harem-bahoaka kokoa noho ny roa-polo, tahaka ny materielinvesteringerne nitombo be. Ny fifanarahana nanamafy ny Fiarovana ny fandraisana anjara amin'ny OTAN ny fiaraha-deterrence, ny fahafahana mandray anjara amin'ny iraisam-pirenena ny asa, ny faribolana ny antoko politika dia nanapa-kevitra e. Ny volana janoary taona, mba hanamafisana ny Fiarovana amin'ny loharanon-karena fanampiny ary koa ny fampidirana ny efa misy lohateny, ho toy ny zavatra fiarovana ny fandaniana raha ny, dimy ny harin-karena. Araka ny fifanekena, izay mandeha mandroso ahitana ny isan'ny efa misy lohateny ho an'ny eo ho eo. telo arivo tapitrisa. isan-taona ao ny zavatra tatitra momba ny fiarovana ny fandaniana ny OTAN araka ny OTAN famaritana ny fiarovana, ny fandaniana ary ny hafa firenena ny fomba fanao. Misy nanapa-kevitra forsvarsforligskredsen fa Danemark mampitombo ny fiarovana ny teti-bola amin'ny alalan'ny, miaraka amin'ny fanampiny, dimy lavitrisa. Ny fandrahonana ny tontolo ankehitriny dia lehibe kokoa noho ny amin'ny fotoana hafa hatry ny fahalavoan ny rindrin'i berlin. Fandrahonana mety hitranga na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, na ny lavitra sy ny akaiky eo amin'ny manodidina. Ny fiarovana dia tsy maintsy hankamamy ny zavatra fanjakana ny fiandrianam-pirenena sy ny antoka ny mbola fisian'ny fahamarinan-toetra sy ny fiarovana. Ny tsy voahozongozona zavatra fiarovana sy ny fiomanana dia fepetra takiana mialohan'ny ahafahana soa aman-tsara ny fiaraha-monina. Ny enin-taona fifanarahana amin'ny Fiarovana avy - dia ny antoko nanaiky hanome ny Fiarovana ny mitana tosika, izay mampitombo ny, valo arivo tapitrisa. araka ny fifanarahana fanampiny jan.). Ny fiarovana dia, amin 'ny faran' ny conciliation fe-potoana efa maro miasa amin'ny vondrona sy ny miaramila noho ny tamin'ny andro, ary koa ny tsy ledelsestung rafitra. Mandritra izany fotoana izany, isika dia fanamafisana ihany koa ny fanjakana maika ny asa fanompoana amin'ny olona maro kokoa sy kokoa ny fitaovana, toy ny manamafy orina ny cyber faritra be. Ny mitana hanandratra ny filaminana, indrindra ny Fiarovana ao amin'ny faritra manaraka ireto: ny fampiasam-bola amin'ny fahaiza-manao vaovao, toy ny brigade, luftforsvarsmissiler ny frigates, dimam-polo hampitombo ny specialoperationsstyrkepatruljer, sy ny fahafaha-manatanteraka ubådsbekæmpelse. Ny fiarovana dia tsy maintsy manana ny hery sy ny faharetantsika, fa miaraka amin'ny OTAN nahasakana ny firenena hafa avy nanafika ny mpiara-dia sy ny tenantsika.
isan-taona ao (sy fanampiny, dimy lavitrisa
Ny fifanekena vaovao, Danemark ny fandraisana anjara manerana izao tontolo izao indrindra ho fiarovana alliance mba hahazo hery betsaka.
avy, fa ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny asa mihamatanjaka, toy izany koa ny amin'ny ponenana fiafaran ny taona tapitrisa.
isan-taona dia mitovy ny vokatry ny dimam-polo isan-jato. raha oharina amin'izao fotoana izao. Ny fiadanana sy ny stabilization tahirim-bola ho nanamafy izany ny ponenana ny taona tapitrisa. isan-taona mitovy mitombo mihoatra ny isan-jato. raha oharina amin'izao fotoana izao.
Ny fiarovana ny vokany nitombo robustness sy ny manovaova, toy ny brigade ny singa azo nalefa manokana iraisam-pirenena ny asa, ny fametrahana ny jiro-tongotra ny andia-tafika izay azo ampiasaina amin'ny firenena sy iraisam-pirenena, sy ny vola fanampiny crews ho an'ny Fiarovana sy ny fitaterana fiaramanidina.
amin'ny alalan'ny mitombo ny fanohanana ny polisy amin'ny niambina sy ny miaramila ambony fahazotoanareo, izay afaka manohana, ohatra: amin'ny raharaha fanafihana mpampihorohoro. Raharaha miaramila sy ny mobiliseringsevnen ny fankaherezana, dia ny Fiarovan-tena dia afaka tsara kokoa ny manentana ny miaramila ao ny zava-nitranga ny krizy na ireo ady ao Danemarka. Mametraka ny mobiliseringskompagni ao amin'ny tsirairay amin'ny borigady ny ady vondrona. Ao ny conciliation-potoana dia hampitombo ny isan'ny conscripts ny. Bebe kokoa hanana intsony ny asa fanompoana noho ny amin'izao fotoana izao, ary fanompoam lasibatra-pirenena ny zava-tsarotra. Ankoatra izany, ny tanjaka rekrutteringsindsatsen mba hanome ny ambony indrindra azo atao an-tsitrapo conscripts. Mandritra izany fotoana izany ny fanamafisana orina ny fanjakana ny fiomanana amin'ny roa fanampiny conscripts sy materiel. Ny mafy andraikitra any amin'ny tendrontany Avaratra ho foana sy nampatanjaka ny ponenana ny maro ny vaovao fandraisana andraikitra toy izany ho toy ny vaovao an-trano beredskabsuddannelse ao guinée-bissau, værnepligtsafprøvning ao guinée-bissau sy lokalansættelser amin'ny tendrontany Avaratra Didy. be, ao ny tsy mivoaka conciliation-potoana.
Sensor tambajotra ho nitatra, fametrahana cybersituationscenter sy ny Foibe ho an'ny Cybersikkerheds fandalinana sy ny fisorohana ny fahaiza-manao.
Tsy mety ho dobo dimy zato tapitrisa. noho ny fikirakirana ny ho avy cyberudfordringer ary mandritra izany fotoana izany, ny fankaherezana ary mifantoka fikarohana sy ny fanabeazana dingana, ka Danemark eo amin'ny lohalaharana amin'ny fivoaran-draharaha vaovao ao amin'ny taona ho avy. Fiaraha-mientana ho an'ny tranainy ankaherezin'ny ponenana fifanarahana, amin'ny bl. nanamafy ny fifantenana ny miaramila, ny fikarohana sy ny tsaratsara kokoa ho an'ny onitra.
Any Danemark-maso ny Fiarovana sy ny fampandrosoana ny bl.
ny fifanarahana ara-politika - antsoina hoe fiarovana ny fifanarahana. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nisy ny fomban-drazana ny multi-ponenana isan-taona. Forsvarsforligene mitarika ny tanjona sy ny rafitra ho an'ny fampandrosoana ny tafika mitam-piadiana ao amin'ny vanim-potoana ny fifanarahana-boky fonony.
Ny vokatry ny fambolena tena toetrany - ny Fividianana sy ny fivarotana ny fambolena, fananana manontolo ny Danemark
Жеке үлестік меншік қызметкердің игілігі үшін менің бизнес. Юридическая фирма njord